Mifananidzo mukutenderera: chii uye kuti ungashandise sei IPhone nhau
Mifananidzo mukutenderera: chii uye kuti ungashandise sei
Chii chinonzi Photo Stream? Kufamba mifananidzo Icho chiitiko cheICloud (gore raApple) umo, kana isu tichiita kuti ishandiswe, iwo mapikicha akatorwa kubva kune chero chishandiso icho zvakare chine chakabatana anochengetwa. Kune rimwe divi, iyi mifananidzo inogona zvakare kuwanikwa kubva kumidziyo ine basa rakabatana uye iri kushandisa imwechete Apple ID.
Asi, zvine musoro, sevhisi haina mugumo. Nguva yakareba yapfuura taigona kungoisa mafoto ekupedzisira chiuru kana iwo emazuva makumi matatu apfuura, asi ikozvino muganho wakaiswa neICloud yedu, ndiko kuti, 1.000GB kana tisina kondirakiti yakawanda nzvimbo. Zvino iyo zvatisingakwanisi ye Mifananidzo mukushambadzira mucherechedzo chete izvo zvatinogona kuisa nguva nenguva, izvo zviri Mifananidzo chiuru paawa, zviuru gumi pazuva uye 1.000 pamwedzi.
1 Maitiro ekumisikidza Photo Stream
2 Inotenderera Mapikicha inotora nzvimbo?
3 Chekuita kana Photo Stream isingashande
4 Maitiro ekudzima Photo Stream
5 Wona Photo Stream kubva paWindows
Maitiro ekumisikidza Photo Stream
Kugadzira Ekumhanyisa Mapikicha kuri nyore. Chaizvoizvo iwe unofanirwa kungoishandura, chimwe chinhu chatichawana nekuita aya matanho:
Isu tinovhura iyo iPhone Zvirongwa.
Tinotsvedza uye tinotsvaga Mifananidzo neKamera.
Pakupedzisira, isu tinomutsa switch Mifananidzo yangu mukutenderera.
Muchikamu chino unenge waona kuti pane sarudzo inonzi ICloud Photo Raibhurari. Iyi sarudzo ichatsiva yedu yemuno reel neimwe iri mugore, iyo ine ayo akanaka uye akaipa mapoinzi. Chinhu chakanaka ndechekuti hazvizotora nzvimbo pane yedu iPhone, iPod Kubata, iPad kana Mac.Chakashata ndechekuti kana, semuenzaniso, tichiita mavhidhiyo akati wandei mu4K, tichakurumidza kupera nzvimbo muICloud.
Inotenderera Mapikicha inotora nzvimbo?
Hongu uye kwete. Mifananidzo mukutenderera usatora nzvimbo yemuno, asi ivo vanotora nzvimbo mugore, ndiko kuti, muICloud. Mifananidzo yakachengetwa muICloud nehurongwa uhwu haina kumanikidzwa, saka vanozobvisa nzvimbo patinotora mifananidzo, asi vachabvisa nzvimbo kubva kuICloud, kwete kubva kunochengeterwa michina kubva panobvunzwa gore.
Chekuita kana Photo Stream isingashande
Ichi chinhu chisati chamboitika kwandiri uye ini handina kuverenga chero nyaya futi, asi panogara paine mukana. Kana tisingakwanise kuwana mifananidzo yedu, ticha:
Simbisa reboot Inogadzirisa zvinosvika makumi masere muzana ezvinetso zvidiki zve software, saka chinhu chekutanga chandingaedze kudzvanya bhatani rekutanga uye bhatani rekusara kusvikira ndaona apuro. Kana isu tatanga, tinotarisa kana tichigona kuona edu mapikicha mukushambadzira kana kwete.
Dzvanya sarudzo uye woimisazve ndicho chinhu chinotevera chandingaite. Chaizvoizvo kwaizove kuita nzira yekudzoka nekudzoka kune izvo zvinoratidzwa mune poindi Maitiro ekugadzirisa Mapikicha mukutenderera.
Buda iCloud uye pinda zvakare ichave yangu inotevera sarudzo. Kuti tiite izvi, tichadaro Kugadzika / iCloud, tinotsvedza pasi ndokupomba Buda kunze. Kana isu takaita sarudzo Tsvaga yangu iPhone tichafanirwa kuisa password yedu.
Kana pasina chimwe cheizvi chashanda, chechipiri chingave chiri bata Apple Rutsigiro. Zvingangodaro, ivo vachatipa mhinduro yatisina kuwana.
Maitiro ekudzima Photo Stream
Kana tave nesarudzo yakamisikidzwa, dambarefu nyowani richaonekwa muchikamu chemifananidzo chemidziyo yese yakabatana neiyo ID yeApp uye sarudzo iyi yashandiswa. Delete yekumhanyisa pikicha hazvina kumbosiyana nekuti tinobvisa sei pikicha kubva kuiri reel, saka zvese zvatinofanirwa kuita zvinotevera (zvinoratidzwa kubva kune iPhone):
Isu tinovhura iyo Photos application.
Hande kuAlbum Mifananidzo yangu mukutenderera.
Takatamba pa Sarudza (kana tichida kudzima akati wandei) kana isu tinopinda pikicha tobata marara anowanikwa muzasi kurudyi (muIOS 9).
Kana isu tichida kudzima akati wandei uye isu tabata Sarudza, rinotevera danho nderokubata iyo mifananidzo iyo yatinoda kudzima. Bhuruu "V" ichaonekwa inoratidza iya yatakasarudza.
Isu tinobata marara anogona icon.
Pakupedzisira, tinosimbisa kubviswa kwemifananidzo.
Zvino, kana izvo zvauri kuda kubvisa iri sarudzo, izvo zvauchazofanira kuita ndiyo nzira yekumashure yakatsanangurwa panguva yekumisikidza Mifananidzo mukutenderera.
Wona Photo Stream kubva paWindows
Kana ukasashandisa Mac, unogona kugara uchiwana izvi nemamwe masevhisi eApple kubva pamahwindo. ICloud Photo Library inogona kuwanikwa kubva icloud.com, asi iyo Yekutsikisa Mifananidzo haioneke ipapo (yakaipa kwazvo). Kana iwe uchida kuwana aya mafoto kubva paWindows, uchafanirwa kuita aya matanho:
Isu tinogonesa Mifananidzo mukutenderera pane imwechete iOS chishandiso
Tinotora iCloud yeWindows kubva IZVI ZVINONZI. Inoenderana kubva paWindows 7 zvichienda mberi.
Isu tinoita uye nekuisa iyo faira kurodha mudanho rekutanga.
Isu tinovhura iCloud yeWindows.
Isu tinogadzira yedu Apple ID, iyo yatinoda kushandisa kuona edu mafoto.
Tinosarudza masevhisi atinoda kushandisa. Zvine musoro, Mifananidzo mukushambadzira inofanirwa kunge iri imwe yadzo.
Isu tinoshandisa otomatiki kurodha pasi uye isu tinogona ikozvino kuona mafoto akachengetwa muICloud kubva paWindows.
Iwe unotoziva here kuti Ndeipi Kufambisa Mifananidzo uye maitiro ekuishandisa?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » dzakawanda » Mifananidzo mukutenderera: chii uye kuti ungashandise sei
DataMan Inotevera mahara kwenguva yakaganhurirwa